शिक्षक पार्टीको परिकल्पना - परिकल्पना
गृहपृष्ठ / शैक्षिक / समाचार / शिक्षक पार्टीको परिकल्पना
by परिकल्पना on June 08, 2021 in शैक्षिक, समाचार
प्रिय शिक्षक साथीहरू,
यो मेरो अनुरोध जति सक्दो सेयर गरि मुलुकका सबै न्याय प्रेमी शिक्षक सम्म पर्यउनु हुनेछ भनेर बिस्वास लिएको छु।
यो बिचमा मैले शिक्षक का बारेमा केही स्टाटस लेखे। साथिहरूको सदासययुक्त कमेन्टहरूले मलाइ उत्साही बनाइ रह्यो। मैंले यस्ता स्टाटस लेख्नुमा यो धोतिफुर्के सत्ताले शिक्षकलाइ नचिनेको मात्र होइन बजेटमा सौताको छोराको व्यवहार गरको देखेर म भित्रको शिक्षक लाइ दुख्यो र मैंले अबको राज्यसत्ता शिक्षक को हुनेछ भन्ने उद्घोषका साथ स्टाटस लेखे।अधिकाम्स साथीहरु ले मलाइ नेतृतव लिन पनि अनुरोध गर्नु भयो। मैंले भने शिक्षक पार्टि बन्यो भने मेरो भुमिका अभिप्रेरक अभिभावकको रूपमा रहने छ‌। हो म पार्टि बनाउने काम मा भरपुर सहयोग गर्ने छु। केही साथीहरुले प्राय बाठा शिक्षक हरू कुनै न कुनै पार्टीको झोले भएको बताउनु भयो र कसरी सम्भव होलार भनेर शंका गर्नु भयो। मलाइ लाग्यो आफ्नालाइ आफ्नैले हराउने दृस्टान्त रामायणमा बिभिषणको भुमिकावाट शंका गर्न नमिल्ने त होइन तर मैले भने सबै शिक्षक लाइ देशको पीडा थाह छ र देश नरहे झोले हुन पनि मिल्ने छैन। त्यसैले शिक्षक पार्टि बन्यो भने शिक्षक ले नै अन्तर घात गर्ने छैनन। आफ्नो घरमा आगो लगायर कस्कोमा वास माग्न जाने? शिक्षक लाइ थाह छ यस्तो भयो भने उनीहरूलाइ सन्तान बुझ्ने भएपछि घिक्कार्ने मात्र होइन थुक्ने छन।तसर्थ कुनै शिक्षक कसैको झोले हुनै सक्दैनन। मैंले भने शिक्षक नै मलिक हो कसरी दासता स्वीकार गर्न सक्छ? शिक्षकले चाहे भने मात्र यो देशमा परिवर्तन सम्भब छ। हरेक दिन लाखौ अभिभावकको प्रतक्ष वा अप्तछ्य रूपमा सम्बन्धमा आइ रहने शिक्षक कसरि एक्लो हुन सक्छ? आफ्ना बाबु नानि पछि अभिभावकले मायामान्ने नजिकको ब्यक्ति शिक्षक नै हो ।
शिक्षक को पहलमा हरेक चुनावले माहोल फेरेको मैंले देखेको छु र यो सरकारलाइ जिताउने पनि शिक्षक नै थिए। तेती बेला शिक्षक लाइ थाह थिएन यो धोती फुर्के सरकार हुन्छ भनेर। शिक्षक को बिस्वास प्रति धात मात्र होइन लात हान्यो यो सरकारले। शिक्षक लाइ निजी र सरकारी भनेर दुइ खेमामा बाँडेर फुटाउ र शासनगरको शिद्दान्तले दुबै खाले शिक्षक लाइ प्रयोग गरेर राज गर्यो। शिक्षक सासित हुन पुग्यो। मैंले भने शिक्षकले आफुभित्रको शिक्षक नचिनेरनै निम्छरो भएका हो‌। म भन्न चाहन्छु जागौं साथी हो।एकजना साथी ले भन्नु भयो शिक्षक को काम पढाउने हो राजनिति गर्ने होइन। मैले भने त्यसो भए शिक्षक ले भोट हाल्न पनि भएन नि त! मैले थपे शिक्षकले चुनाव हार्यो भने पुन पद वाहलि गराउदा न्याय हुन्छ।
राजनितिक कार्यकाल समापन पछि कोही पुन शिक्षक हुन चाहन्छ भने उसलाइ त्यो अबसर दिइनु पर्छ‌। यी मांग शिक्षक को सरकार बन्यो भने सम्बिधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित हुन पनि सक्छन। पढेको बुझेको ,जानेको मान्छेले राजनिति गर्न हुन्न भन्नु यही धोतीफुर्के राजनिति जोगाउन हो। यसै बिचमा बकेर मात्र केही हुदैंन गरेर देखाउ। झोला फालें भनेर धोषणा गर र फिल्डमा आउ भन्ने च्यालेन्ज पनि पाँए मैले। मैंले भने म कसैको झोले थिइन , छैन र हुने छैन। मैले बोक्ने झोला शिक्षक को हुने छ।त्यो झोलामा देश बनाउने किताप कपि र कलम हुनेछ।शिक्षक पार्टिले चुनाब जितेर राज्य सत्ता लिए पछि मेरो जिम्वेवारी पुराहुने छ र भिष्म पितामह झै तीर शे्ैयामा पनि गणित पढाएर मोर्न चाहन्छु। मैंले राष्ट्रवादि लेप लाएको यो सरकारलाइ भोट दिएको हो तर झोले भएर होइन। लेप उत्त्र्यो र मेरो बुझाइ रह्यो अब कुनै पनि नेपाली मनले यो अधिनायक बादि सत्ताको खिलाफमा मत जाहेर गर्ने छ र यसलाइ आर्यघाट पुर्याउने छ। तर फेरी पासा कता पल्टिन्छ त? यीनै पुराना पार्टि फेरि राज्य सत्तामा आए भने के हुन्छ?
इतिहासले बतायो सबै एउटै शक्ति केन्द्र बाट सन्चालित छन र जुन जोगी आयो कानै चिरेको जस्तो मालिकका सेवामा समर्पित रहने र देशको दोहन गर्ने नै देखिन आयो। त्यसैले मेरो मनले शिक्षक मात्र तेस्तो अजय शक्ति हो जो उठ्यो की जित्यो। उस्को चुनाव मितव्ययी हुनेछ। उ उठ्यो मने उस्को प्रचार बिद्यार्थी र अभिभावकले गर्ने छन जसमाथि शिक्षकले कहिलै गद्दारि गरेन। र कहल्यै अतिरिक्त लाभ खोजेन र कसैलाइ आफ्नो र कसैलाइ पराइ भनि काखा वा पाखा गरेन।शिक्षक को गुन कसरि तिरौं भनेर छटपटि भएको यो समूह शिक्षक को शैनिक जत्था हुनेछ। तेसैले जागौं साथी हो। यसैबिचमा मलाइ कसैले भन्नु भयो अहिले र यस पहिलाका सत्तासिनहरू शिक्षक नै थिए नि त।हो ती चाही झोलेनै थिए र आफुभित्रको शिक्षक लाइ मालिकको पाउमा चडाएका थिए।हैन भने देवि ओझा देखि गंगालाल तुलाधर तथा गिरिराज मुनि सम्मका शिक्षक ब्याकग्राउण्डका शिक्षा मन्त्रीको पालामा भएका शिक्षा सुधार जे भए तपाइ हामी सामु छर्लङ्ग छदै छ नी, होइन र?
अबको शिक्षक पार्टी विशुद्द शिक्षक ले बनेको २४ क्यारेट सुन जस्तै शुद्द हुने छ र एकमना सरकार बनाउने सामर्थ्य राख्नेछ। केही साथिहरुले भन्नुभयो समाजिक अभियन्ताहरू को पार्टि बनाए भै गो नि किन चाहियो शिक्षक पार्टि? मैंले भने यिनीहरू कनिका छरेर जनमत संगेल्दै छन र मौजुदा पार्टिहरूकै ओकालतगर्ने हरू हुन सक्छन। यीनिहरूको जरो टुप्पो देखिदैन। छिटो हुर्केका वाटुलपाते जस्ताहुन जस्ले आफु झुण्डिएको बरको रूखलाइ भन्थ्यो रे हेर त म यति छिटै तीमि भन्दा अग्लो भए। तीमि जति वांचे भने त मैले आकास छेड्ने छु। बिचरो वाटुलोपाते वर्षा सकिदा संग सगै बिलायो।तेसैले आधारहिन यी अभियन्ता लाइ यति छिटो बिस्वास नगरिहालौं कि ? हांमीलाइ नैतिकता नगुमाएको र सत्ता स्वाद नचाखेको पार्टि चाहिन्छ जुन शिक्षक पार्टि मात्र हो। एकजना राजावादि मित्रले तपाइ झोले होइन भने राजावादि संग सहकार्य गरौ भन्ने प्रस्ताब ल्याउनु भयो ।मैंले भने राजाले आंटेनन।उनीमा आत्मविश्वासको अभाव छ।उनी पनि पुजा गेेरेर टिका थापेर राजा हुन खोज्दै छन। मिले सम्म इन्डियाको हात्तीले माला लगाइदिएर राजा हुने दाउ हुनपनि त सक्छ। परिवर्तनको आशा नगरेकै बेश। यस्मा थप। यो पार्टि जाति, जनजाति बर्ण , धर्म लिङ्ग, हिमाल पहाड तराइ को समावेशी पार्टी हुने छ। किन भने शिक्षक सबैको प्रतिनिधित्व यसरी नै भएको छ‌। त्यसैले जातिय बिभेद नहुने, छेत्रिय विभेद नहुने, धार्मिक सहिष्णुता हुने, लैंगिक समानता, बर्ण भेद नहुने, बर्गिय बिभेद नहुने एक मात्र पार्टी यही मात्र हुने ‌हो‌।
एक जना शिक्षक मित्रले मलाइ शिक्षक पार्टी हुन सक्ने प्रस्ताब ल्याउनु भयो छिटो जुमबाटै भए पनि छेत्रिय र राष्ट्रिय स्तरको शिक्षक भेला गरि बिधान मस्यौदा कमिटी बनाइ पार्टि दर्ता गर्न ढिलो नगरौ भन्नु भयो। मलाइ लाग्यो शुभ कार्यमा ढिलाइ किन। त्यसैले साथी हरू एउटा च्यानल निर्माण गर्नुस र सब कुरा थाति राखेर देश सोचौं। यो मेरो प्रस्ताव भाइरल बनाऔं।यस्तै स्टाटस लेख्नुस अविभावक, विद्यार्थी बिच पुर्याउनुहोस्। एउटा न्युज च्यानल, स्थानिय रूपमा एफ एम रेडियो बनाउनुहोस र अहोरात्र खट्नु होस । तपाइको खटाइले तीन चौथाइ दिनेछ। तपाइ हरू लाइ अग्रिम शुभकामना।
- H.N. Upadhyaya
✍️ परिकल्पना at June 08, 2021